तपाईंको निवास अनुमतिका लागि सम्बन्ध विच्छेदको नतीजाहरू Law & More
ब्लग » तपाईंको निवास अनुमतिका लागि सम्बन्धविच्छेदको नतिजा
तपाईंको निवास अनुमतिका लागि सम्बन्धविच्छेदको नतिजा
के तपाईं नेदरल्याण्ड्समा तपाईंको जीवनसाथीसँग विवाहको आधारमा निवास अनुमति दिनुहुन्छ? त्यसो भए तलाकको नतिजाले तपाईको निवास अनुमतिलाई असर गर्न सक्छ। जे भए पनि, यदि तपाईसँग सम्बन्ध विच्छेद गरिएको छ भने तपाईले सर्तहरु पाउनु हुन्न, निवास अनुमतिमा तपाईको अधिकार समाप्त हुन्छ र यसैले IND ले फिर्ता लिन सक्दछ। सम्बन्ध विच्छेद पछि तपाईं नेदरल्याण्ड्समा बस्न सक्नुहुनेछ वा कुन आधारमा, निम्न परिस्थितिहरूमा निर्भर गर्दछ जुन छुट्याउन आवश्यक छ।
तपाईका बच्चाहरु छन्
के तपाईं सम्बन्ध विच्छेद हुनुहुन्छ, तर तपाईंसँग नाबालिग बच्चाहरू छन्? त्यो अवस्थामा, नेदरल्याण्ड्समा निम्न मुद्दाहरूको लागि निवास अनुमति राख्न सम्भावना छ:
तपाईंले एक डच नागरिकसँग विवाह गर्नुभयो र तपाईंको बच्चाहरू डच हो। त्यो अवस्थामा, तपाईं आफ्नो निवास अनुमति राख्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईंले आफ्नो डच नाबालिग बच्चा र तपाईं बीचमा यस्तो निर्भरता सम्बन्ध छ भनेर देखाउनुभयो भने कि यदि तपाईंलाई निवासको अधिकार प्रदान गरिएको छैन भने तपाईंको बच्चा EU छोड्न बाध्य हुनेछ। प्राय: निर्भरता सम्बन्ध हुन्छ जब तपाईं वास्तविक हेरचाह र / वा पालनपोषण कार्य गर्नुहुन्छ।
तपाईको EU नागरिकसँग विवाह भएको थियो र तपाईका बच्चाहरु EU नागरिक हुन्। त्यसोभए तपाईंसँग एकतर्फी अधिकारको मामलामा वा अदालतले स्थापना गरेको भ्रमण प्रबन्धको अवस्थामा नेदरल्याण्ड्समा कार्यान्वयन हुनै पर्छ। तपाईले देखाउनु पर्छ कि तपाईसँग परिवारलाई टेवा पुर्‍याउन पर्याप्त स्रोतहरू छन्, ताकि कुनै सार्वजनिक कोष प्रयोग हुने छैन। के तपाईका बच्चाहरु नेदरल्याण्ड्स मा स्कूल जान्छन्? त्यसोभए तपाईं माथिबाट छुट पाउन योग्य हुन सक्नुहुन्छ।
तपाईंले एक गैर ईयू नागरिकसँग विवाह गर्नुभयो र तपाईंको बच्चाहरू गैर ईयू नागरिक हुन्। यस्तो अवस्थामा तपाईंको निवास अनुमति राख्न गाह्रो हुन्छ। त्यो अवस्थामा, तपाईं केवल अनुरोध गर्न सक्नुहुनेछ कि नाबालिग बच्चाहरूले ECHR को अनुच्छेद 8 अन्तर्गत आफ्नो निवास अधिकार कायम राख्न सक्दछन्। यो लेखले परिवार र पारिवारिक जीवनको सुरक्षाको अधिकारलाई नियमित गर्दछ। यस लेखको लागि अपील वास्तवमै सम्मानित छ कि छैन भन्ने प्रश्नको लागि विभिन्न कारकहरू महत्त्वपूर्ण छन्। यो पक्कै पनि सजिलो तरीका छैन।
तपाईं बच्चाहरू छैन
यदि तपाईं बच्चाहरू हुनुहुन्न र तपाईं सम्बन्धविच्छेद गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने, तपाईंको निवास अनुमति समाप्त हुनेछ किनभने तपाईं अब तपाईंको घरको अधिकारमा निर्भर व्यक्तिको साथ बस्नुहुनेछैन। के तपाईं आफ्नो सम्बन्ध विच्छेद पछि नेदरल्याण्ड्स मा रहन चाहानुहुन्छ? त्यसो भए तपाईलाई नयाँ निवास अनुमति चाहिन्छ। निवास अनुमतिका लागि योग्य हुन, तपाईंले केही सर्तहरू पूरा गर्नै पर्छ। IND ले जाँच गर्दछ कि तपाइँ यी सर्तहरू पूरा गर्नुहुन्छ कि गर्दैन। निवास अनुमति जसको लागि तपाईं योग्य हुनुहुन्छ तपाईंको अवस्थामा निर्भर गर्दछ। निम्न अवस्थाहरू छुट्याउन सकिन्छ:
तपाईं एक EU देश बाट हो। के तपाईसँग EU देशको EEA देश वा स्विजरल्याण्डको नागरिकता छ? त्यसोभए तपाईं बाँच्न सक्नुहुन्छ, काम गर्न सक्नुहुनेछ वा युरोपियन नियमहरू अनुसार नेदरल्याण्ड्समा व्यापार वा अध्ययन सुरु गर्न सक्नुहुनेछ। अवधिमा जुन तपाईं यी गतिविधिहरू (एक) गर्नुहुन्छ, तपाईं नेदरल्याण्ड्समा आफ्नो साथीविना रहन सक्नुहुन्छ।
तपाईंसँग residence बर्ष भन्दा बढीको लागि निवास अनुमति छ। त्यो अवस्थामा, तपाईं एक स्वतन्त्र निवास अनुमति लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। यद्यपि तपाईले तलका सर्तहरू पालना गर्नुपर्दछ: तपाईसँग एकै पार्टनरसँग कम्तिमा years बर्ष निवासको लागि निवास अनुमति छ, तपाईको पार्टनर डच नागरिक हुनुहुन्छ वा अस्थायी बसोबासको लागि निवास अनुमति छ र तपाइँसँग छ। एकीकरण डिप्लोमा वा यसका लागि छुट।
तपाईं टर्कीको नागरिक हुनुहुन्छ। बढी अनुकूल नियमहरू टर्कीका कर्मचारीहरू र उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूलाई सम्बन्धविच्छेद पछि नेदरल्याण्ड्समा रहनको लागि लागू हुन्छ। टर्की र युरोपियन युनियन बीचको सम्झौताको कारण, तपाईं केवल years बर्ष पछि स्वतन्त्र निवास अनुमतिको लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईंको विवाह भएको तीन बर्ष भइसकेको छ भने काम खोज्नको लागि १ बर्ष पछि निवास अनुमतिपत्रको लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ।
के तपाइँको निवास अनुमति विच्छेदको परिणाम स्वरूप फिर्ता लिईएको छ र अर्को निवास अनुमतिको सम्बन्धमा तपाइँको निवेदन अस्वीकार गरिएको छ? त्यसोभए त्यहाँ फर्कने निर्णय हुन्छ र तपाईंलाई एक अवधि दिइन्छ जुन तपाईंले नेदरल्याण्ड छोड्नु पर्छ। यो अवधि बढाइन्छ यदि आपत्ति वा अपील अस्वीकृति वा वापसीको बिरूद्ध दर्ज छ। IND को आपत्ति वा न्यायाधीशको निर्णयको निर्णय नभएसम्म विस्तार जारी रहन्छ। यदि तपाईंले नेदरल्याण्ड्समा कानुनी कार्यवाही समाप्त गरिसक्नुभयो र निर्धारित अवधिमा तपाईंले नेदरल्याण्ड छोड्नु भएन भने नेदरल्याण्ड्समा तपाईंको निवास अवैध छ। यसले तपाईंको लागि टाढाको परिणामहरू निम्त्याउन सक्छ।
At Law & More हामी बुझ्छौं कि सम्बन्ध विच्छेद भनेको तपाईंको लागि भावनात्मक रूपमा कठिन समय हो। उही समयमा, यदि तपाईं नेदरल्याण्ड्समा बस्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो निवास अनुमति बारे सोच्नु बुद्धिमानी हुन्छ। स्थिति र सम्भावनाहरूको राम्रो अन्तर्दृष्टि महत्त्वपूर्ण छ। Law & More तपाइँलाई तपाइँको कानूनी स्थिति निर्धारण गर्न मद्दत गर्न सक्छ र, यदि आवश्यक छ भने, अवधारणाको लागि आवेदन वा नयाँ निवास अनुमतिको ध्यान राख्नुहोस्। तपाईंसँग केहि अन्य प्रश्नहरू छन्, वा तपाईं माथिको कुनै एक अवस्थामा आफूलाई चिन्नुहुन्छ? कृपया वकिलहरुलाई सम्पर्क गर्नुहोस् Law & More.
अघिल्लो पोस्ट उडान ढिलाइ क्षतिको लागि क्षतिपूर्ति
अर्को पोस्ट सम्बन्ध विच्छेदको बखत र पछाडि कसलाई वैवाहिक घरमा बस्न अनुमति छ?